Ny fomba amam-panao saram avy any Shina - ohatrinona no mandoa ny fomba amam-panao raha buy avy any Shina - ny fanaovana kajy ny hetra ny fomba amam-panao an-tserasera
Ny fomba amam-panao saram avy any Shina — ohatrinona no mandoa ny fomba amam-panao raha buy avy any Shina — ny fanaovana kajy ny hetra ny fomba amam-panao an-tserasera
Hi, aho nividy ny singa gazy bisikileta (handlebars sy ny tahony), dia teny eo amin’ny tranonkala ny fomba amam-panao ao izay ireo singa (raha tsy natao ho an’ny fanamboarana ny bisikileta) mety ho azo iadian-kevitra ny andraikitry ny. dimy no marina mba manao kajy ny adidy momba ny habetsaky ny fandefasana ary ny vat. na dia ho kajy ihany ny lanjan’ny entana. Hi efa nividy akanjo ao amin’ny tranonkala iray fa sambo avy any Shina ho zava-dehibe ny miampy ny fandefasana entana sy fiantohana ny entana dia natolotra tamin’ny fotoana maro ary ankehitriny aho dia nangataka ny haban-tseranana ny voalohany fonosana, ny zava-dehibe tokony ho dimy amby telo-polo, sy haban-tseranana dia, saingy toa tsy ho azo atao.
Ary avy eo dia avy eo, isaky ny entana azoko handeha aho mba handoavana ny haban-tseranana, ary avy eo dia mandoa ny zava-drehetra indroa. Hi, aho dia te hanontany anareo amin-katsaram-panahy raha misy hevitra amin’izay mety ny habetsaky ny fomba amam-panao saram-amin’ny fividianana ny roa finday avy any shina mba Italia (ny fitambaran’ny sarobidy ny euro) miampy ny fandefasana amin’ny dhl ho roa-polo amby iray euros. Azo atao ny manana ny tombana ny amin’ny hanaovana fitsaram-bahoaka. Misaotra anareo aho ary hanome ampitiavana fiarahabana tsara maraina aho dia efa nividy bisikileta ao Shina, miaraka amin’ny fitambaran’ny sarobidy ny shipping. ny entana dia alefa amin’ny alalan’ny navevorrei hahafantatra ny fomba handeha aho handany ny fotoana izay aho dia hanangona ny fonosana. fiarahabana Miarahaba aho nividy akanjo fampakaram-bady value euro eo amin’ny toerana okmi aho dia te-hahalala ny fotoana dia ny iraka aho hoe ny qnt ammontanole ny fandaniana tanteraka, tokotokony ho eo ny fomba amam-panao sy ny hafa hetra izay azo atao. Misaotra mandalena, raha ny hevitro, ny Euro tsy misy fiampangana ny haban-tseranana, nefa izany dia miankina amin’ny inona no karazana vokatra izy ireo mpiara-miasa ny akanjo AMIN’NY FANDANIANA NY efa-jato EUROS ny KODIARANA X KODIARANA HO an’ny HAZAKAZAKA BISIKILETA, INONA no tsy maintsy handoa ny REHETRA ny HETRA SHIPPING SHINA Hi aho, Tokony hividy tanteraka ny anarivony euros, ny tapa-kazo amin’ny bararata. Ny entana dia avy any Philippines, alefa amin’ny transport maritime. Tiako ho fantatrao, nahoana no tsy hetra izany karazana entam-barotra. hi efa nividy dimam-polo elektronika vokatra avy amin’ny sanda ny dimy dolara isam-lanja tanteraka amin’ny fandefasana fiampangana dolara, amin’ny maha-tsy miankina novidina avy ny wholesaler toy ny tsy maintsy mandoa adidy na vat. Hi, Aho acquitato finday avy any Shina amin’ny Geekbuying. Ny vola lany amin’ny dia, shipping, asicurazione, vola amin’ny-toerana. Ny fonosana nahazo amby telo-efatra ny fomba amam-panao hetra, izay no marina. Misaotra azoko sary an-tsaina momba ny roambinifololahy euro vat sy ny enina euros ny fomba amam-panao adidy (kanefa izany dia miankina amin’ny vokatra sokajy ity) dia, euros ny vesatra raikitra, ary ny tsy fahampian’ny ny antsoina hoe Addemibo-panjakana foana ny fanangonana ny iraka. tsara hariva ny anarako dia Enrico, raha azo atao aho dia mila ny vaovao marin-toerana, ny maha-izy ny raharaham-barotra kely ny tompony, sy ny aotra traikefa eo amin’ny mividy any ivelany ny vondrona eoropeana. amin’izao fotoana izao izy ireo amin’ny fifampiraharahana amin’ny orinasa sinoa iray mba hividianana milina ny soratra pirinty fivarotana, ny lanjan’ny. USD kokoa spedizionedi USD express amin’ny TNT tamin’ny tapa-bolana, ka ny fitambaran’ny ny fiara miampy ny fandefasana manao, USD mba EURO, (inona aho, te-hahafantatra))ny entana milanja kg zavatra misy fiantraikany eo amin’ny resaka fomba amam-panao.)fa ny fehezan-dalàna dia nataony tamin’ny toy izany koa ny entana.)misy teny notsongaina fa ireo no mandrindra izay dia omena anao, dia atao ny fikajiana ny vola lany.)dia tsy ho afaka hanao izany kajy.)aho mividy amin’ny socetà srls amin’ny fehezan-dalàna mpanafatra mavitrika, aho dia tsy maintsy mandoa ny vat ny vola. fomba amam-panao orinasa ao shina. ny lafiny ny valiny miaraka amin’ny fanantenana fa afaka manampy ahy. misaotra betsaka ENRICO, Miezaka mamaly izay aho dia afaka: — ny lanja Ny entana na inona na inona ny ifandraisany amin’ny hetra. mazava ho azy fa hisy fiantraikany amin’ny vidin’ny ny iraka- Ny maha-mpikambana amin’ny fehezan-dalàna momba ny milina raha toa ianao tsy afaka ny hamantatra izany tsy amim-pisalasalana amin’ny rohy ao amin’ny lahatsoratra, tokony mivantana anontanio ny fomba amam-panao. angamba amin’ny fanoratana, dia tsy maintsy mandoa ny fomba amam-panao adidy, VAT FIAMPANGANA sy ny haban-tseranana. ny adidy tsy mila ny fehezan-dalàna (etsy ambony), ny VAT dia toy izany, fa izany dia saika azo antoka fa ho tamin’ny roa amby roa-polo, noho ny fiampangana ny haban-tseranana dia mety ho afaka hanampy ny Iraka mivantana aho- Tsy afaka ny hilaza raha ny milina ho an’ny fanaovana raharaham-barotra (fitaovana) dia azo heverina ho toy ny VAT afa-miala ny SRL manafatra. fa izaho kosa tsy mino. Miala tsiny fa dia ny valiny tsy marina, fa ny tanjon ny olana heveriko fa mendrika ny torohevitra matihanina, ity vaovao ity dia antitra. FEDEX no nanome ahy ny amin’izao fotoana izao ny lahatsary. Ny nahavaky tratra ny fomba amam-panao ADIDY iray isan-jato ny lanjan ny vokatra. Ny HABETSAKY ny ADIDY dia miankina amin’ny tsara (roa ambin’ny folo akanjo ess. valo ny kiraro hoditra). avy eo dia misy ny vat izay ao ny raharaha ny roa amby roa-polo tamin’ny (LANJAN’NY ENTANA tanteraka ny vola lany amin’ny fitaterana habetsahan’ny fanafarana adidy aloa). loharano FEDEX ny andro androany, vonona Foana ny vaovao farany ny info fa tsy azoko hoe ahoana ny»taloha»vaovao ianao dia manondro: ny adidy dia hita (kajy ny dimy satria merceologicamente lehibe kokoa, fa izany no nanazava tsara fa mila mampiasa ny isan-jaton’ny ny sokajy izay misy fiantraikany eo ny fividianana) ny Vat ny roa amby roa-polo efa nampidirina ao amin’ny solosaina fiampangana, haban-tseranana (raha noho). afa-tsy, mazava ho azy, misy fiampangana ny iraka. Ao ny raharaha, ohatra, raha miditra amin’ny taonjato fahenina ambin’ny folo amin’ny adidy ny roa ambin ny folo mahazo ary avy eo dia ampio ny fiampangana raha toa izy ireo noho ny, sy ny iraka. Ny tanjona ny fanaovana kajy dia ny mba hanome antsika ny hevitra momba ny habetsaky ny vola, alohan’ny hanaovana ny hividy. Tsy-bahoaka, ny isan-jato ny adidy sy ny hazo fijaliana-momba ny fomba amam-panao, satria matetika no fiovana. afaka mandoa euro hetra isan-karazany ny fomba amam-panao, ny vat sns ho zava-dehibe ny diman-jato dolara. Androany aho dia nahazo chassis avy any Shina, tsy maintsy milaza fa ny vokatra dia tena tsara, fa ny hetra ho an’ny chassis NOOltre mba handoavana ny vat ‘ny roa amby roa-polo sy mbola mieritreritra tsara izany, dia nandoa ny andraikitry ny valo amby efapolo ny nanambara ny vidy ny entana FA IZAHAY ADALA dia fanomezam-pahasoavan’ ny governemanta ny renzi, co, raha tsy diso aho fa karazana entana dia foto-kevitra manohitra ny famarinana adidy ny.
Toy ny hatramin’izay, mitovy ny vokatra (e.g. fitafiana, lamba mihitsy) ny vidin-javatra dia tena samy hafa sy ny antony nahatonga ny fiovana rehefa misy minitra. Misaotra Miarahaba, izaho dia te-hividy ny kodiarana loader ao Shina sarobidy ny, ohatrinona ny vidiny ahy mazava ny fomba amam-panao. Misaotra Hi, aho, mila manao ny hividy avy any Shina ny tokony ho enim-polo euros, ohatrinona ny tokony handoavana ny fomba amam-panao saram. Ary izay no tsy maintsy mandoa vola. Mety ho avy amin’ny iray mpiambina tao amin’ny poste italiane»postman»aoka aho hahafantatra, noho ny fandaniana, raha misy, dia nandoa ny iraka izay manangona rehetra noho ny amin’ny alalan’ny fifandraisana azy ireo mialoha. Raha toa ilay zavatra dia alefa amin’ny mail ny sinoa (ary, noho izany, ny fanaterana ny Poste Italia) noho ny habetsaky ny enim-polo euro dia tena azo inoana fa tsy mandoa na inona na inona. Ny vola mety ho, toy ny enta-mavesatra ny haban-tseranana sy ny VAT ny nanambara ny lanjany. Vao omaly aho no nandray ny graphics card ny vidin’ny vidiana ao amin’ny express noho izay efa nandoa na inona na inona miarahaba sy misaotra anao noho ny zavatra ataonareo ho antsika toy ny mpampiasa, dia nividy ny karbaona toe- ny tahony amby roa-iray sy mihazona ny lasely sivy ambin’ny folo te-hanontany ny hetra dia voampanga amin’ny fitambaran’ny entam-barotra, na ny tapa-by kely noho Antonello, efa nanome baiko entana avy any Shina amin’ny varavarana delivery. ny hetra ho an’ireo izay no tsy maintsy handoa ny iraka izy rehefa mamonjy ny entana, na efa handeha ho any amin’ny seranam-piaramanidina sy mazava ny fomba amam-panao izaho sy ny entana. Raha ny mahazatra, ny iraka (ohatra DHL) hifandray aminao amin’ny alalan’ny finday na ny mailaka sy mahatonga anao ny kaonty. mety na tsy mety hanontany anao ny antsipiriany momba ny entana eo am-pahatongavana. Tsy mbola manana ny handeha ho any amin’ny fadin-tseranana
Ny mpiaro online - online-dalàna Torohevitra - Mpisolovava Manaraka